WQ / YT Fampidiran-tsolika mitambatra Prefabricated pump Station Product
Ny baran-dranon'ny prefabricated mitahiry fahaizana azo avy any Shanghai Kaiquan dia karazana lozomina famafanavina ary rafitra fanangonana sy fisandratana rano. Izy io dia fitaovana natambatra mampiditra ny grille anatiny anaty rano, paompy rano, fantsom-peo, valve, fantsona fantsom-pifandraisana, fanaraha-maso amin'ny herinaratra.
WQ / EC Series Sivana kely vita amin'ny paompy fanamboarana
WQ / EC paompy fanamboarana paompy kely misy 7.5kW ary ambanin'ny vao navoakan'i Shanghai Kaiquan dia manana ny fiasan'ny fampidinana ny rano mafana loatra sy ny fiarovana ny rano. Manilika ny tombotsoan'ny vokatra mitovitovy amin'ny any an-trano sy any ivelany, ary mampiditra ny traikefa ampiasain'ny orinasa Kaiquan.
KQSS / KQSW andiany roa-dingana miadana roa tonta miendrika boribory haingam-pandeha sentimentugal pumpon dia famolavolana mason-javona roa vaovao. Ilay andiany dia mampiditra ny fikajiana ny angovo sy ny teknolojia fanamafisana ny fahaiza-manao novolavolain'i Kaiquan, sary avy amin'ny fanjakana ny teknolojia zava-kanto mitovy.
ZQ (HQ) Series Submersible Axial Flow Pump, Fangaro mifangaro
Kaiquan ZQ, HQ blade semi azo ovaina azo alain-drano sy pump pump mifangaro (voatambatra fantson-tsofina ao anatin'ity santionany ity) no vokatra nohavaozina voatondraka axial flow pump sy pump pump.
Paompy fanamiana WQ Serbmersible
Ny andiany WQ (11-22kW) & WQ (ambony 30KW) dia misy paompy fanamboarana paompy azo novokarin'i Shanghai Kaiquan nampihatra ny fenitra nasionaly GB / T24674-2009 "Fomba famatsiana rano miloko mpanodinkodina sy fanodinana rano". Izy io dia ny mitrandraka ny tombony amin'ny vokatra mitovy any an-trano sy any ivelany.
KQK tontolon'ny fanaraha-mason'ny herinaratra KQK dia ny famolavolana maoderina amin'ny Shanghai Kaiquan Pump (Group) Co. Ltd. miorina amin'ny taona niainany tamin'ny fampiharana ny tontolon'ny paompy, izay tamin'ny alàlan'ny fihetsiketsehana sy fanaovan-tsoa nataon'ireo manampahaizana.